Ndị pushups ọ dị mma maka obi gị? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Na-eme ka ahụike obi - mkpebi dị mma
Na-eme ka ahụike obi - mkpebi dị mma
Ndị pushups ọ dị mma maka obi gị?
N'ime nyocha afọ 10 nke edepụtara na February, ndị nchọpụta kwuru na ụmụ nwoke nwere ike ime 40ibili elunwere onye butere 96% obere ihe egwu nkeobiọrịa karịa ụmụ okorobịa ndị na-enweghị ike ịchịkọta 10.03.26.2019
♪ Bob na Brad ♪♪ Physiotherapists abụọ a kacha mara amara Internet Na Ntaneti ♪ - Ndewo ndị bekee, Abụ m Bob Schrupp, Physiotherapist - Brad Heineck, Physiotherapist - Anyị bụkwa ndị ọkachamara n'ihe banyere physiotherap na ịntanetị. echiche, n'ezie, Bob. Taa bụ ihe na-atọ ụtọ, anyị nwere mmega ahụ otu nkeji nke na-ebu amụma ihe egwu gị maka ọrịa obi.
Ọ bụ Harvard mere ya na ọ karịrị 1000 dị ka 11000 n'ezie ndị na-ere ọkụ na ha mere ha ka ha mega ahụ wee soro ha ọtụtụ afọ iji hụ ole n'ime ha nwere ma ọ bụ nwee ihe gbasara obi dị ka nkụchi obi ma ọ bụ ọrịa strok ụfọdụ. Ọrịa ọrịa obi karịa ndị emeghị nke ọma.- Mmega! - Ihe omume.- Ya mere ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọpụta ihe ọ bụ, jigide.
Anyị ga-egosi gị. - Nke ahụ dị mma. Site n'ụzọ, ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ na ọwa anyị, biko were nke abụọ iji denye aha anyị.
Anyị na-enye edemede gbasara otu ị ga - esi gbasie ike, dabara adaba na mgbu, ma anyị na - ebugo ha kwa ụbọchị. Ga-achọkwa ileta anyị na ntanetị mgbasa ozi anyị, Instagram, Facebook, n'ihi na anyị na-enyefe ngwaahịa anyị na-eme oge niile. Anyị na-enye ngwaahịa ma anyị na-eme akwa ụra ụra. - Aka nri - nkpuru 700.
Nke a bụ naanị obere akụkụ nke ụkpụrụ nke matraasi - Aka nri. - Little teas. Ma o nwekwara ọwa ikuku, Brad. - Ọ na-eme ka ọ dị jụụ. - Ziri ezi.
Ihe a niile na - agbakwunye Bob, maka ọmarịcha --- Ọ dị mma. - Ọ dị mma, enwere m ike ịra ụra ugbu a.
Odi mma, aga m enweta ihe a n'uzo. - Ugbu a, anyị abịarute mmemme ahụ, Bob. - Ọ dị mma. - Anyị debere ya enyo. - Nke ahụ dị mma. - Ọ dị mma, anyị abịaghachila.
Anyị nwere obere nsogbu igwe okwu ebe a, mana ọrịa obi na-ebute ihe na-egbu mmadụ n'ụwa niile. Ya mere anyi nwere ihe omumu ozo, Harvard mere akwukwo. 1000 firefighters, na-anwa ịkọ ihe ize ndụ nke ọrịa obi na ihe gbasara obi dịka obi ọgụ. - Mmmm - yabụ naanị mmega ahụ bụ ntinye aka.
Ya mere, ha hapụrụ ndị a ka ha mee ọtụtụ ihe dị ka ha nwere ike. Ha jiri metronome mee ihe dị ka 80 beats - dịkwa mma. Ọ tụgharịrị ka ọ bụrụ ihe dị ka nkeji, yabụ, ole na-agbanye mgbali? Oops ha nwere ike ime na nkeji.
Ha enweghị ike izu ike ruo ihe karịrị ugboro atọ, ị maara na ha enweghị ike ịkwụsị ma mee ka ọ dị mfe. - Ọ dị mma. - had ga-aga n'ihu.
Ya mere, ha mere nke a wee soro ndị ọkụ ọkụ ruo ọtụtụ afọ ma ha chọpụtara na n'ụzọ bụ isi azịza ya bụ, ka ị na-enwekwu ike ịkwalite ya, belata ihe ize ndụ nke ọrịa obi. - Ọ bụghị nnukwu ihe ijuanya. Mana, dịka ọmụmaatụ, maka ndị ritere ihe na-erughị 10 ma e jiri ya tụnyere ndị meriri karịa 40, ndị meriri karịa 40 nwere ohere 96% nke inwe ihe ọ bụla. - Nke ahụ dị mkpa. - Ee, ọ dị mkpa.
N'ezie, ha fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ị nweghị ohere ọ bụla ịme ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịme 40 ọfụma. - 40 na nkeji? - Ee, 40 na nkeji. - Ọ dị mma. - Ya mere ịmara ihe, Brad, ị maara na m ga-anwale ikike a? - Ee, ee - Enweghị m ngwa m ebe a.
Ana m arịọ mgbaghara, mana (ọchị) ma ọ ga-abụrịrị na ị ga-ekpo ọkụ ebe a.
Enwere m ike, ị maara.- Ee, gbatịa ya ntakịrị.- Aghaghị m ịgbatị ntakịrị ebe a.- you zụrụ n'ụtụtụ a? - Ọfọn, m gbara ọsọ na echi.- you mere? - Ee.- Ọ dị mma, nke ahụ dịtụ ọkụ, n'ezie ọ bụ ogo 30 n'èzí.- Ee.- Kedu ka ị ga - esi mee ha otu ahụ ma ọ bụ - Aga m aga n'okporo ụzọ a ka m wee
Yabụ m ga-agụ ha ọnụ, mana ị nwekwara ike ịgụ ha. Naanị ị dị njikere ịga - Enwere m njikere Bob, ị dịla njikere? Nke a bụ nrụgide. Nrụgide, ọ dị mma, ka anyị hụ ihe Bob nwere ike ime.
Ka anyị gaa, mere. Na tiptoe, G.I.
Anyị na-eme mkpọtụ - 3,4,5,6,78,9,10,11,12,13,14 - nke ahụ ọ na-adọrọ mmasị? 15,16,17 - ọ ga - emeli ya? Keep na-agụta Bob .- 20, 1.- Na-eku ume.
Ka a pụọ. Ọ naghị amasị gị ịwelite isi gị elu? Bob enweghị mmasị na nke ahụ, ọ na-ewute m mgbe niile. Ọ na-amasị m idebe isi m mgbe m na-eme ihe ndị ọzọ.
I. Amaara m ihe ha mere n'ọmụmụ ihe ahụ. Ike gwụrụ Bob ugbu a.
Otú ọ dị, ọ na-eje ije nke ọma, mara mma, ma sie ike. Ezigbo triceps. - 40, 41.- Ọ dị mma, ezigbo ọrụ.- Mana ana m agwa gị, nke a bụ ihe gbasara obi.
Echere m, ọ na-etinye nsogbu n'obi gị - ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ ihe ọnụọgụ obi gị dị ugbu a. - Eeh. Ugbu a ọ nwere ike ịbụ 700-700 (ọchị) - Ya mere ọ bụ n'ezie nnukwu mmega ahụ.
Ọ na-azụ isi gị, na-azụ ume gị yana ọ na-azụ obi gị enweghị ike ikwu ihe ọ bụla ọzọ, ike gwụrụ m. (ọchị) - Enwere ezi akaebe na ị nwetara obi gị n'otu nkeji. - Daalụ maka ikiri. - Woo, ezigbo ọrụ, Bob.
Ugboro ole ka m kwesịrị ime maka ahụike obi?
Gịnị Number ofIbili eluGịNwere Ike ImeNa-ekwu Banyere GịObi Obi. Nchoputa ohuru n’eme ndi mmadunwere ike ime40ibili eluma ọ bụ karịa n'otu oge nwere ike ịnwe obere nsogbuọrịa obikarịa ndịnwere ike'nw22.02.2019
Na-eme 40 pushups a ụbọchị ọma?
Ọ chọpụtara na ndị nwere ike ime karịa40 pushupsn'usoro nwere 96 pasent dị ala nke ịbụ onye a na-arịa ọrịa obi ma ọ bụ na-enwe nsogbu obi ndị ọzọ n'ime afọ 10, ma e jiri ya tụnyere ndị ikom ahụ nwere ike ime ihe na-erughị 10ibili elu.02/16/2019
Anyị kpọrọ asị imebi gị, ma ọ dịghị onye na-enwe mmasị mara mma ogwe aka. Kwesighi inwe ịnụ ọkụ n'obi nke ukwuu iji maa mma, mana nyocha na-egosi oge na oge ọzọ na ụmụ nwanyị na-ahọrọ ụmụ nwoke ndị opekata mpe ihe dabara adaba na-egosi na ụmụ nwanyị anaghị enwe mmasị n'ụdị 'buff bodybuilder'. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịbawanye mma nke anụ ahụ ntakịrị, mgbe ahụ anyị nwere nnukwu ihe ịma aka nye gị taa.
Ọzọkwa anyị na-etinye ọkacha mmasị gị na onye kachasị mkpa anyị nyere onye edemede maka mmụba sayensị gị, taa anyị na-ama ya aka ime ọgbụgba iri atọ kwa ụbọchị maka ụbọchị iri atọ! Maka sayensị! 1bọchị 1: Amaara m nwa oge site na nsogbu a, ya mere maka mgbanwe ọ bụghị nnukwu ihe ijuanya dịka ihe ndị a na-abụkarị. Agbanyeghị, ihe kpatara m jiri mara ihe ịma aka ahụ dị mfe: Anaghị m ahụ mma. M na-emega ahụ oge niile ma na-adị n'ụdị, mana iji nweta ezigbo nsogbu nke ihe ịma aka a, achọpụtara m na ọ bụ naanị ihe ziri ezi iji gbalịa belata ogo ahụike m tupu oge eruo, ebe ọgbụgba iri atọ anaghị abụkarị nnukwu nsogbu.
N'ihi ya, akwụsịrị m imega ahụ ọnwa abụọ tupu mgbe ahụ wee ghọọ ngụkọta ndina zuru ezu. Ọ bụrụ na ị bụ onye nsogbu ndị a, ị nwere ike ịmaraworị ihe gbasara ndụ mmekọrịta m na eziokwu na enyi m nwanyị bụ ahụ ike na ahụ ike. Anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ ma ọ na-atọ ụtọ ikiri ka ọ na-aga mgbatị ahụ ma ọ bụ na-agba ọsọ mgbe m na-etinye ụkwụ m elu.
Pushups abụghị onye ọbịa nye m. Afọ isii ndị agha pụtara na m mere ọtụtụ ọkpọka na ọtụtụ ụdị mgbali dị iche iche. Ọ bụ n'ezie ụzọ dị mfe ma dị irè iji meziwanye ahụ ike gị n'ụzọ dị ịrịba ama, ọkachasị mgbe ịmalitere ijikọta ọdịiche dị iche iche nke nrụgide iji rụọ ọrụ akwara dị iche iche.
M na-emekarị 9 set nke esiri-acha ọkụ na atọ ọdịiche mgbe na-agbagọkwa na-eme 90 pushups, ọkara bụ mgbe pushups na ndị ọzọ na ọkara bụ diamond pushups nke bụ ihe siri ike karịa maka iri isii ụbọchị m maa anaghị atụ anya ịta m ahụhụ ọzọ , n’ihi na izu ole na ole ndị mbụ na-abụkarị ihe kacha sie ike mgbe ị na-ewuli ike gị. Emeworị m nke mbụ nke iri atọ na ntanetị taa ma na njedebe m zuru oke n'uche m, ọ bụ naanị na m mere ya na nke ikpeazụ. Echere m na m maa eleda anya ike ị nwere ike ida na ụbọchị iri isii.
Echere na nke a ga-abịaru ọkwa ahụike nke onye nwere ike ịnwale ihe ịma aka a na-enweghị ọtụtụ mgbatị ahụ ma nwee olile anya na nsonaazụ ya ga-abụ ihe na-akpali akpali maka ndị mmadụ na-achọ ịkpụzi, dị ka mgbe niile, aga m edekọ mmetụta m na-enwe kwa izu ma ọ bụ ihe agbanweela. Ana m eme ihe iri atọ na otu ụbọchị wee mee nnọkọ ntachi obi na ngwụcha izu ọ bụla ma hụ ọtụtụ m nwere ike ịpụ n'usoro iji hụ otu m siri meziwanye. N'ihi na ọfụfụ anaghị agụta ma ọ bụrụ na i mee ha nke ọma, ihe m na-elekwasị anya abụghị ọsọ kama na ị na-eme ihe zuru ezu, ọfụma ma ọ bụ na ị na-efu isi.
Aga m ahụ gị n'otu izu. 7bọchị 7: you chetara ihe m kwuru na izu ole na ole mbụ bụ nke siri ike iji nwee ahụ ike? Anaghị m egwu egwu. M na-eme iri atọ ugboro ugboro, enweghị nsogbu, mana mgbe ụbọchị iri isii nke mmega ahụ efu, achọrọ m ịtụba mgbe m mere nke ikpeazụ.
Ọ na-echetara m mgbe mbụ m na-bootcamp afọ ndị gara aga, M bụ na ezigbo udi mgbe m napụtara, ma m bụ n'ezie adịghị njikere na m na-echeta na-aga n'ókè ebe m gafere na mgbe ụfọdụ hụrụ kpakpando n'anya m. Ahụghị m kpakpando ọ bụla, mana nke a abụghịkwa picnic, ọ na-esiri m ike ijikwa ọgbụgba iri atọ na-enweghị nkwụsị. Emere m oge marathon m taa wee nweta ọgbụgba na iri abụọ na abụọ, ọ bụghị ezigbo nsonaazụ.
Kaosinadị, ogwe aka m na-enwetaghachi nkọwa ha, dịkwa ka obi m dị. Akpọrọ m nkụda mmụọ anụ ahụ ike maka ọnwa abụọ gara aga, ya mere ọ dị mma ịmara na m na-esikwu ike, mana anọ m ebe m bidoro. Naanị maka ị Iụrị ọ Iụ m na-achọ ịhụ ole diamond push ups m nwere ike ime m mere na ọ na-akwụsị mgbe - ma ọ bụrụ na ị na-eche ihe diamond push acha ọkụ bụ mgbe ị na-etolite a diamond site na iji aka gị Collapse nke mere na gị isi mkpịsị aka izute na-etolite ala n'ọnụ ọnụ diamond na mkpịsị aka gị na-ezukọ iji mepụta elu? dayamọnd
Mgbe ahụ ị na - agbada ahụ gị wee bulie ya ọzọ iji jide n'aka na ị na - achịkwa oge niile. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịmegharị ma na-achịkwa mgbe ahụ ị naghị eme ọfụma na ị gaghị enweta elele nke otu, yabụ emela aghụghọ. Nsonaazụ a na-enweta n’izu nke mbụ bụ ntụtụ 32 na nke kacha elu 8 diamond push-ups n’usoro.
Ọ bụghị ihe ọjọọ, mana nke a ga-abụ ugwu dị elu ịrịgo. 14bọchị 14: Ntugharị kwa ụbọchị enwetala mfe, mana ha agabeghị ije na ogige ahụ. Enwetara m enyi ahụ na-achị ọchị mgbe m na-alụ ọgụ, wee chetaara ya na m abanyela n'okwu atọ n'ime ya na mbụ, nke ọ zara, sị, 'You nwere mmasị na mmekọahụ.' Amaara m na ọ na-egwu egwu, ma m achọ ịma, ọ nwere ike ịrị elu ọkpụkpụ ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ka m chọpụta na nkọwa na-alaghachi na ogwe aka m, mana ahụ m na-aza mgbe niile na ahụ ike dị ngwa ngwa, yabụ nsonaazụ gị nwere ike ịdị iche.
Adị m ebughibu site na okike, mana obi m na-amalitekwa ịmaliteghachi nkọwa ya, agbanyeghị, mgbe ị tufuru afọ, ị ga-emeso mgbatị ahụ maka na ọ gaghị eme. Emeela m oge marathon m ma mee 36 pushups na 12 diamond pushups ozugbo, nke bụ mma dị mma. Ana m atụ anya ịnọgide na-emeziwanye na ịgakwaghị agwa enyi m nwanyị na m nwere 'ogwe aka nwa agbọghọ'.
Ọ na-ekwu ụzọ kachasị mma isi kpalie m bụ site na nkwado na-adịghị mma na nke ịkwa emo. 21bọchị 21: Pushups na-agwụ ike, mana ekwesịrị m ikweta - mmega ahụ bụ ihe niile. Na ndụ m, m na-adị mma, mana enweghị m mmega ahụ.
Amaara m na ụfọdụ ndị mmadụ na-eme, enyi nwanyị ahụ hụrụ n'anya n'ezie - ọ bụghị nsonaazụ ya, m na-ekwu na onye ọ bụla hụrụ nke ahụ n'anya, mana ezigbo ọgụ ọ na-agba. Achọrọ m ịdị mma, achọrọ m ịdị ike, mana m kpọrọ mmega ahụ asị. Karịsịa ihe niile m kpọrọ asị ịga ije.
Agbanyeghị, ọfụfụ na-agwụ ike. Abịala m ebe ọgbaghara iri atọ esighi ike. Ọ ka bụ obere ọrụ, mana enwere m ike iwepụ ha na enweghị nsogbu ọ bụla mgbe izu atọ gachara.
Ogwe aka m ji nwayọọ nwayọọ na-akọwawanye, mana amaara m site na ahụmịhe gara aga na ọ bụrụ na ị na-achọ nsonaazụ anụ ahụ, pushups abụghị nnukwu maka nke ahụ, ị ​​ga-achọrịrị mmega ahụ ọzọ. Pushups dị mma maka iwulite ike, mana mmega ahụ dị mma maka iwulite ike adịchaghị mma maka iwulite mmadụ - enwere ihe dị iche. Offọdụ n'ime ụdị kachasị dị elu ma dị egwu ị nwere ike ịma nwere ume na ume dị ntakịrị nke na-abata naanị n'ọkụ.
Mụ nwoke ndị nwere akwara na-anaghị akacha ike nwere ike ịnwe ọtụtụ ume ma nwekwa ume karịa ogologo oge. Nke a bụ ụdị ike ndị agha kacha wee mara, anyị bụ ya mere ndị agha ole na ole ji dị ka ndị na - arụ ọrụ n'ahụ - nke ahụ nwekwara ọtụtụ nnukwu ego ga - egbochi gị. Anyị kpọrọ ụmụ okorobịa a 'igosi anụ ahụ' n'ihi na akwara ha bụ maka igosi, ọ bụghị maka ike.
Ọ bụrụ na i sonyela, ị ga-ahụrịrị nkọwa ụfọdụ na ogwe aka gị na obi gị, ọkachasị ka ị na-ehulata ogwe aka gị ka ị mechie gbagọrọ agbagọ mgbe ị na-eburu ihe, mana ọ bụrụ na ị na-atụ anya ịza aza naanị ịme ihe, ọ gaghị. Ga-enwetakwu nkọwa, mana ị gaghị enweta 'nnukwu', ma ọ bụrụ na ịchọrọ nkọwa ka mma, ị ga-agbakwunye ibu igwe - ma ọ bụ ọkacha mmasị m: calisthenics. M na-ezere ịdị arọ n'ọtụtụ oge ma kama iji ịdị arọ nke ahụ n'onwe ya mgbe ọ bụla enwere ike - nke ahụ na-ewuli ọtụtụ ike na ntachi obi.
Emere m oge marathon m taa wee ruo 46 pushups na 20 diamond pushups niile ma ọ bụrụ na ị na-aga, ị nwere ike. O doro anya na ọ ga-adị mfe, dịka m kwuru, ọ na-agwụ ike ugbu a, amaara m na ọ bụrụ na m chọrọ ịdị ike karịa naanị iri atọ n'ụbọchị, ọ gaghị ezuru. 30bọchị 30: Oge marathon nke ikpeazụ taa na m mere 55 pushups na 24 diamond pushups.
Ekwesiri m inwe ọfụma isii, mana enyi nwanyị ahụ gụrụ ma ọ jụrụ ịgụta ise n'ime ha n'ihi na ọ sịrị na azụ m ezughị ezu amaara m nke ọma na azụ m kwụ ọtọ, echere m na ọ na-enwe mmekpa ahụ nke ukwuu, nke pụtara m na-akwa ụta maka inye ya ike ahụ site n'ime ka ọ bụrụ ọkwa m. Ogwe aka m na obi adịghị eche na ha adịghị ike ma na-eri nri dịka ha mere mgbe ọnwa abụọ nke ndina ndina, amaara m na m ka nwere ogologo ụzọ m ga-esi laghachi ebe m nọ. Ọ bụrụ na ihe ịma aka gị nọ n'ụlọ, nke a bụ oge dị mma iji tinye ụfọdụ dị iche iche na usoro ị na - eme ma ị nwere ike ịme ka ọ bụrụ usoro maka ụbọchị ọ bụla iji zere inwe mmetụta dị ka ọkụ sitere n'akụkụ kachasị dị egwu nke usoro ihe omume ọhụrụ bụ mgbe ị na-amalite ịhapụ ụbọchị ole na ole ọ na-adịrị mfe ịkwụsị kpamkpam.
Ọ bụrụ na ịnweghị ọdịnala siri ike nke imega ahụ, kama ịgbanwe ya kwa ụbọchị iji nye onwe gị ezumike. Ma mgbe ị mere ihe ịma aka anyị na Ugbu a, dịka m mere maka izu gara aga, ugbu a bụ oge zuru oke iji gbasawanye usoro ị na-eme. Ana m akwado ịzụrụ ụlọ ịdọpụta ụlọ, ọ bụ mmega ahụ dị mfe, dị mfe, na nnukwu nke ga-agbakwunye ike na nkọwa.
O siri ike karịa ihe ọ bụla, mana ịhụ nsonaazụ anụ ahụ na-abụkarị ihe mkpali na-aga n'ihu. N’ezie, ọ ga-abara gị uru ma ọ bụrụ na ị nwere enyi nwanyị nwere mmasị ịta gị ụta site n’iji okwu mkparị na-ekwu okwu banyere ịnabata obere nwa nwanyị ịlụ gị.
Mgbanye elu ọ na-enyere aka belata cholesterol?
Tụlee ịnwale nchikota ụdị mmemme ndị a iji meziwanye gịcholesterolọnọdụ: Ihe omume aerobic: Ndị a bụ ọrụ ịgba ume obi dịka ịgba ọsọ, ịwụli eriri, ịnya igwe na igwu mmiri. Omume ike-ọzụzụ: Ndị a bụ mmega ahụ ike dị ka squats,Kwaa-acha ọkụna akpa ume.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ iji belata cholesterol gị n’agaghị ọgwụ, maọbụ ọbụlagodi na ị na-a medicationụ ọgwụ ma chọọ ụzọ iji nyere aka, nke a bụ isiokwu maka gị. Nọgide na-achọ ụzọ dị mfe ma dị mfe iji weghara ọnụọgụ ndị ahụ. Ndewo, a bụ m Dr.
Erik Richardson, onye dibia bekee. Achọrọ m ịnabata gị na FamilyMed, ọwa a na-elekwasị anya n'iwetara gị ozi ahụike bara uru na nke ziri ezi iji nyere gị na ezinụlọ gị aka ịbụ ihe ga-enyere gị aka ijide n'aka na ị debanyere aha, pịa pịa bọtịnụ ngosi ma soro anyị. Taa, anyị ga-agabiga ihe ole na ole ị nwere ike ime ugbu a ka ị belata cholesterol gị, ka anyị tụleghachi nkenke ihe mere anyị ji eche banyere cholesterol na mbụ.
See hụrụ, a na-eme cholesterol na imeju gị ma nwee ọtụtụ ọrụ dị mkpa na ahụ gị niile, mana dịka ihe ọ bụla, ọtụtụ ihe dị mma na ọtụtụ ebe na-ezighi ezi nwere ike ime mgbanwe. Cholesterol dị ka abụba na ọ naghị agbari na mmiri. N'ihi nke a, a ga-ebufe ya n'akụkụ ahụ site na ụmụ irighiri ihe a na-akpọ lipoproteins.
Tinyere ihe ndị ọzọ, cholesterol ndị a na-ebu ọbara. Enwere ọtụtụ lipoproteins nke na-esite n'ọbara. A na-akpọ otu n’ime ha LDL - nke a bụ lipoprotein dị ntakịrị, ọ na-eweta cholesterol n’akụkụ dị iche iche nke ahụ, ọ bụkwa ya na-akpata kọlkọllet na-enye aka na ọrịa obi ‘Cholesterol’.
N'ụzọ dị iche, anyị nwere ihe anyị na-akpọ HDL ma ọ bụ oke njupụta lipoprotein. Ndị a bụ ọrụ maka esere cholesterol site n'akụkụ dị iche iche nke ahụ. Anyị na-akpọ ya 'cholesterol dị mma'.
Ọ nwere mmetụta nchekwa na cholesterol anyị. Ebumnuche anyị na ịgwọ cholesterol bụ ịchọta ụzọ iji belata LDL ma ọ bụ cholesterol ọjọọ ma bulie HDL ma ọ bụ ezigbo cholesterol. Ka anyị kwuo maka ụfọdụ ụzọ ị ga - esi mee nke a ma aga m akwado ilekwasị anya na ihe anyị na - akpọ abụba na - emeghị.
Anyị anụla ihe niile banyere otu ị ga - esi zere abụba juputara na ọ bụ eziokwu, mana belata LDL gị ma melite HDL gị, bido tinye abụba na - edozi ahụ na nri gị. Enwere ike ịchọta ndị a na mkpụrụ oliv, mmanụ oliv, mmanụ canola, mkpụrụ osisi dị ka almọnd, walnuts, pecans, na cashews, n'etiti ndị ọzọ. Nke a maara dị ka oxidation nke cholesterol, nke na-enyere aka igbochi akwara.
Ihe nke abuo m ga akwado bu itinye udi mmanu di iche na nri gi. Ndị a bụ abụba ndị a na-emefu. Ihe ndị a bụ omega-3s gị, ihe dịka azụ gị ndị nwere abụba dịka salmon, makarel, azụ asa, azụ mmiri dị omimi dị ka bluefin na albacore, yana ihe nwere azụ azụ dị ka oporo.
I nwekwara ike ịchọta ha na mkpụrụ osisi na mkpụrụ dị ka flaxseed iji belata LDL cholesterol gị ma belata ihe ize ndụ nke ọrịa obi na ụdị ọrịa shuga 2. Ya mere, ihe abụọ a bụ ihe ị ga-agbakwunye na nri gị. Agbanyeghị, ihe ọzọ ịchọrọ iwepụ bụ abụba trans.
Ndị a bụ abụba na-edozi site na ịgbakwunye hydrogen. Emere ya iji mee ka ha kwụsie ike. Nwere ike ịchọta ndị a n'ihe dịka margarine azụmaahịa na mgbasa butter, achịcha, na kuki.
Nsogbu a na TransFats bụ na ị ga-eweli cholesterol zuru ezu, gụnyere LD gị, ma wedata ezigbo cholesterol gị, ma ọ bụ HDL, site na ihe ruru 20%. Na mba ndị ọzọ na mba ndị ọzọ, achọrọ ụlọ ọrụ na-ahụ maka nri ka ha depụta ọnụọgụ abụba trans na ndepụta aha nri, mana ọ dị mkpa ka ị gụọ ha. Aha ndị a nwere ike ịbụ aghụghọ - na United States, ụlọ ọrụ nwere ike ịkpọ ngwaahịa ha dị ka gram gram nke abụba trans mkpọ ma ọ bụrụ na ha nwere ihe na-erughị gram 0,5 kwa otu.
Nke ahụ apụtaghị na ha anaghị. Ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime anyị enweghị karịa otu akụkụ, ị ka nwere ike ịgụnye ọtụtụ abụba trans na nri gị. Guo ihe oriri na-edozi ahụ ma ọ bụrụ na o nwere ihe edepụtara dị ka mmanụ hydrogenated ma ọ bụ mmanụ nwere hydrogenated, ha nwere abụba trans na ọ dị mkpa ka ị pụọ na ha, ihe dị mma ịgụnye na nri gị.
Nke a bụ eriri soluble. Nke a bụ ụdị eriri nke sitere na osisi ma nwee ike igbari ya na mmiri, mana ụmụ mmadụ agbarighị agbarie, nwere nje na eriri afọ gị. Nri nke eriri site na nje bacteria na-enyere aka belata cholesterol ọjọọ gị.
Nnukwu ihe eji enweta eriri nwere ike ịgba bụ agwa, agwa, lentil, mkpụrụ osisi, na ọka oat. I nwekwara ike ịchọta ya na mgbakwunye mgbakwunye eriri dị ka Metamucil. Ihe nke ise ikwesiri ime bụ mmega ahụ.
Egosiputa mmega iji belata LDL gị na-emerụ ahụ, mana ọ na-emekwa ka ezigbo HDL gị dịkwuo elu. Nnyocha ndị buru ibu egosiwo na minit 30 nke mmega ahụ ụbọchị ise n'izu nwere ike imeziwanye ọkwa cholesterol gị ma belata ihe ize ndụ nke ịrịa ọrịa obi. Otu nnyocha gosiri na isetịpụ ihe mgbaru ọsọ gị iji mee ka obi gị ruo 85% nke kachasị elu nwere ike ịbawanye ọkwa cholesterol dị mma.
Ya mere mmega ahụ dị mma n'ozuzu ya, mana ka ị na-emewanye mgbatị gị na ogologo oge mgbatị ahụ, a na-ahụkwu uru. Nọmba nke 6 bụ ihe doro anya na mgbe ị na-eme ya bụ ihe kachasị mkpa ị ga - eme. Nke ahụ kwụsịrị ise siga! Ụ sịga bụ ihe kachasị njọ ị nwere ike ime maka obi gị ma nwee mmetụta dị ukwuu na otu ahụ gị si ejikwa cholesterol.
N'ime ndị na-ese anwụrụ ọkụ, sel ndị ahụ anaghị enwe ike ịlaghachi cholesterol site na mgbidi arịa gaa n'ọbara ebe o kwesịrị ịdị, ma nye aka na mbido ihe ncheta nke na-eduga na akwara akwara. E gosikwara na nnukwu ọmụmụ ihe iji belata HDL gị ma bulie cholesterol zuru oke. Mee ahụ gị amara ma kwụsị ugbu a.
Nọmba nke 7 lekwasịrị anya n’ibu ibu. Ihe niile anyị kwuru maka ha taa nwere ike inye aka, mana ọmụmụ ihe egosila na naanị ifelata nwere ike inwe mmetụta dị mma na ogo kọlụm gị. Ọtụtụ ọmụmụ egosiwo na agbanyeghị atụmatụ ọnwụ ọnwụ, ọ na-abawanye ezigbo HDL ma belata LDL adịghị mma.
Yabụ họrọ ezigbo usoro iri nri mara mma ma rapara na ya. Ihe na-esote metụtara abụba jupụta na nke anyị tụlere na mbụ. Bịaru nso na nri onye anaghị eri anụ, ọ ga-aka mma na ị ga-wedata ogo ogo cholesterol gị.
Mana maka ọtụtụ n'ime anyị, anyị adighi njikere ịga ụzọ ahụ ma, ka ị họrọ anụ Leaner; anyị ekwuola maka azụ, mana ọkụkọ na toki bụ ezigbo nhọrọ iji ruo. Ọ bụrụ na ị họrọ iri anụ uhie uhie, gbalịa inye ha ahịhịa ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee. Anụ ehi na anụ ezi zụlitere na nza nri na ọtụtụ ọka na-enwekarị uche dị elu nke abụba ndị na-emerụ ahụ.
Họrọ hamburgers gbachapụrụ agbacha ma bepụ abụba tupu ị sie nri. Ihe ndị a niile ga - enyere aka belata oke abụba dị na nri gị. Nọmba 9 bụ mgbakwunye nke sterols osisi na stanols.
Ndị a bụ ụdị nsụgharị nke cholesterol, mana ha anaghị asọpụrụ ịbawanye ogo cholesterol gị. Ha na-asọ mpi n’ụdị kọlesterol dị njọ ma mee ka ha ghara ị fromụbiga mmanya ókè. Egosiputala iweda LDL gi ala, mana otu nsogbu di na ha bu na anyi ahubeghi ha ka iweda obi ha ala, yabụ anyi nwere olile anya na anyi ga enweta ihe omumu ka nma n'ime nke a.
Ihe ikpeazu i nwere ike ime bu ileba anya n’iru ihe oriri. Enwere ọtụtụ ihe n'ebe ahụ, ọtụtụ n'ime ha na-arụ ọrụ iji mee ka omega-3 fatty acids dịkwuo elu. Ihe ndị dị ka mmanụ azụ na mmanụ flaxseed egosila na ọ ga - enyere aka n'ịbawanye HDL gị yana ebe ihe akaebe edobeghị anya, ekwenyere na ha nwere ike inye aka belata ọrịa gị nke ọrịa obi.
Red yist osikapa bụ onye ọzọ nwere ike na-enye aka na ẹsụhọde gị cholesterol etoju, nwere Njirimara dịtụ yiri statin ọgwụ na ike na-arụ ọrụ na mma gị cholesterol etoju. Ileba anya na ogo nke cholesterol bu ihe di nkpa nke ijikwa ihe diri gi maka oria obi.Enwere ogwu ndi gha adighi nma ma ufodu n’ime ha bu ihe di nkpa n’ime usoro ogwu gi.
Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ihe ị ga - eme iji chịkwaa nke a na-enweghị ịdabere na ọgwụ. Maka ọtụtụ ndị na-elekwasị anya na mgbanwe mgbanwe ndụ, na-emega ahụ oge niile, na-ezere ị smokingụ sịga, trans abụba na abụba abụba, na ịba ụba abụba ndị na-enweghị afọ ojuju, eriri soluble, na sterols na stanol osisi nwere ike ịbụ mmalite dị mma iji nwekwuo ahụike ma gbochie nkụchi obi. ma ọ bụ ọrịa strok na-enye aka, ọ bụrụ na biko biko wepụta oge iji nwee mmasị na edemede a ma soro ndị enyi gị kerịta ya, ọ ga - enyere ọwa anyị aka itolite ma rute ndị ọzọ chọrọ nke a na ndụ ha Emela ya n’enweghị ịbanye na ịkụ ọkwa ahụ. bọtịnụ ka ị ghara ịhapụ ihe ọ bụla nke ọdịnihu anyị. Ruo oge ọzọ nke a bụ FamilyMed na Dr.
Richardson ma cheta ilekọta ahụ gị anya n'ihi na ọ bụ naanị ya nwere ya.
Kedụ ọghọm dị na ntugharị?
Na-emeibili eluenweghị ezigbo ụdị nwere ike ibute mmerụ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịnwe obere azụ ma ọ bụ ubu mgbu ma ọ bụrụ na ịmeghịibili elun'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụibili elusiri oke ike na mbido, gbanwee mmega ahụ. Mee ha na ikpere gị ma ọ bụ megide mgbidi.June 22. 2018 Nov.
Ndị 50 na-agbanye ụbọchị ọ bụla ga-eme ihe ọ bụla?
Ee, gịnwere ikebanye50 ntinye aka! Omumainupụ-eluna-abịaru nso na mmega ahụ zuru oke, na-agbagha ọtụtụ akwara dị na ogwe aka, obi, azụ, na isi iji wuo ike ọrụ niile. Mana ka anyi kwuo na elu ahụ m abụbeghị ọkara m.Ọkt 7 2015
Kedu ihe ọghọm dị na nkwụsị?
O nweghi njedebeibili eluotunwere ike imen'imeụbọchị. Ọtụtụ mmadụmeekarịrị 300inupụ otu ụbọchị. Ma maka mmadụ nkịtị, ọbụlagodi 50 ruo 100push-acha ọkụ kwesịrịzuru ezu iji kwado ahụ dị mma nke elu, ọ bụrụhaala na ọ bụmeren'ụzọ kwesịrị ekwesị. Gịnwere ikemalite na20 ntinye aka, mameearaparaghị na nọmba a.Sep 12 2019
esi esi eji akwa igwe
Gịnị nwere ike 40 pushups a ụbọchị na-eme?
Na nyocha nke ndi oku oku nke ebiputara na February 2019 nke JAMA Network Open, ndi nwokenwere ikezuru ezu ma ọ dịkarịa alaNtughari 40ihe karịrị 30 sekọnd nwere nnukwu nsogbu nke nkụchi obi, nkụda obi, ma ọ bụ nsogbu obi obi ndị ọzọ n'ime afọ 10 sochirinụ ma e jiri ya tụnyere ụmụ nwoke nwere ike mezue obereBọchị 18 2019
Mmiri ọ drinkingụụ ọ na - enyere cholesterol aka?
Mmirina-enyekwa aka nri nri, nke dị mkpa makacholesteroletoju. Pasent iri abụọ na ise nkecholesterolna-abịa site na nri.Mmiri na-enyere akaahụ gị mmebi nri ma na-akwado na ngafe nke n'efu.16.05.2019
Ugboro ole ka ị nwere ike ime iji melite ahụike obi gị?
Ihe Number nke Pushups Can Pụrụ Ime Na-ekwu Banyere Ahụike Obi gị. Nchoputa ohuru n’eme ka ndi mmadu puta ihe 40 ma obu karia n’otu oge nwere ike inwe nsogbu nke oria obi karie ndi n’enweghi ike.
Kedụ ka njikọ elu si emetụta ọrịa obi?
Mgbe oge sochiri nke afọ 10, ndị nchọpụta chọpụtara na ndị nwere ike ịme ihe karịrị 40 push-elu n'oge ule ahụ, pasent 96 dị obere karịa ka ha nwere ike ibute ọrịa obi-ma ọ bụ nwee ihe omume obi dịka okpu obi ma ọ bụ ọnwụ mberede-karịa ndị ahụ ndị nwere ike ime ihe na-erughị 10.
Nwoke nwoke nwere ike ime 40 ịpị aka otu oge?
Nchoputa ohuru n’eme ka ndi mmadu puta ihe 40 ma obu karia n’otu oge nwere ike inwe nsogbu nke oria obi karie ndi n’enweghi ike. Nke a bụ ihe kpatara ya. Ọnụọgụ nke ị ga-eme otu oge nwere ike ịbụ ụzọ dị mfe ma dị irè iji tụọ ahụike obi gị. Getty Images Oge ikpeazụ ị mere mkpọtụ na klaasị mgbatị ahụ?